Ukuhamba nengane: amathiphu awusizo
Indlu yasekhaya Ukuzilibazisa
Uma unquma ukuhamba nengane, zama ukunikeza isikhathi esengeziwe salokhu. Wonke umzali omuhle uyazi ukuthi awukwazi ukuthatha ingane endaweni lapho isimo sezulu sihluke kakhulu. Isibonelo, kusukela e-continental kuya emazweni ashisayo kuyingozi ukuhambisa ingane isonto lonke, ngoba isimiso somzimba samasosha omzimba singase sihlupheke. Kodwa eYurophu, angakwazi ukuchitha isonto lonke ngokuphepha. Amazwe angewona wesimo sezulu afaka i-England, i-Ireland, i-Sweden ne-Finland. Akekho owaziyo ukuthi ingane encane izosabela kanjani eduze nolwandle. Ngakho-ke, kungcono ukuya e-Europe Ephakathi.
Ingane engakabi nonyaka owodwa ingase ingaboni ngisho nokuthuthela kwelinye izwe. Uma unina esengamncelisa, khona-ke uzobona ushintsho ekudleni. Zama ukudla okufanayo nasekhaya. Phuza kuphela amanzi angabonakali futhi udle kuphela ukudla okunempilo nokulula, ukhethe ngokucophelela izithelo nemifino.
Kuvinjelwe ukuyeka ukuncelisa ingane ngaphambi kwezinsuku ezingu-30 ngaphambi kokuhamba, futhi nangaphambi kwezinsuku ezingu-14 ngemuva kokubuya.
Uma ingane yakho idla ngokuhlakanipha, ke ngokuhamba kwesikhathi lonke uhambo, thatha izingxube eziningi ngangokunokwenzeka, ukuze ungenayo inkinga. Futhi ukhethe ngokucophelela amanzi okomntwana, ngoba unesisu esibuhlungu kakhulu, okubona ngokushesha ushintsho, futhi uzosindisa ingane kusuka ku-colic, i-diapers eguqukayo njalo.
Imithwalo yemntanakhe ingamatshumi ayisihlanu isisindo sayo. Indalo encane idinga izinto eziningi. Kuhle kakhulu ukuthi kuwo wonke amazwe ungathenga izimpahla esisebenzisayo. EYurophu, ngeke ukwazi ukuthola ama-diapers alungile, ngakho qaphela ngaphambi kokuhamba. Zama ukuthatha nabo kanye ngangokunokwenzeka, ikakhulu uma usebenzisa uhlobo olufanayo njalo. Kule ndaba, ngokuvamile, kungcono ukuthenga lezi zimpahla zeholide lonke ngesikhathi esisodwa. Izingxube zenkampani eyodwa zingase zihluke ngokuphelele eYurophu.
Uma ingane isakwazi ukuhamba kakade, kuyadingeka ukuba ube nezicathulo eziningana zezicathulo lapho umntwana ekhululekile ukuhamba khona. Ungakhohlwa ukuthatha ama-slippers kanye namanye amathoyizi ozithandayo kakhulu wengane. Ikakhulukazi izokulondoloza uma ingane enetheyishi ethile futhi ngaphandle kwayo ayikwazi ukulala. Kodwa kunoma yikuphi ukulahlekelwa isilwane esincane!
Uma uhamba ngaphandle kwesibhamu, buza abameleli bezindiza ngezindawo ezikhethekile nezendawo zabagibeli abanezingane. Ukuthi izinkampani ezifana ne-Aeroflot no-Transaero zinezinhle kangaka, kodwa zincane kakhulu, futhi kudingeka ufike esikhumulweni sezindiza ekuqaleni. Uma ubhala ithikithi, unethuba lokuhleleka ukudla kwezingane. Uma uhamba kude, ekilasini lebhizinisi enkampanini ethi "Transaero" yezingane ezincane uhlelo lokuzijabulisa nemidlalo kanye nemibuzo eqhutshwayo. Uma ingane eneminyaka emibili kuya kweyisishiyagalombili ubudala yedwa yindiza yonke, khona-ke iyobe isetshenziswe ngumphathiswa okhethekile.
Izikhwama zokulala nezikhwama zezingane ezincane zinikezwa yi-KLM. Kukhona nezindawo zabagibeli abanezingane, zikhulu kunendawo evamile. Kukhona izindiza ze-Austrian ezihlinzeka ngezikhwama, kodwa kuphela ekilasini lebhizinisi, kodwa enkampanini yaseHungary Malev, uma ungazise kusengaphambili, ungahlala ngaphandle kokubeletha. Ngokusho kwemithetho yokuthutha yamazwe ngamazwe, kufanele kube nokudla kwezingane kwimenyu oyisayine lapho ubhalela ithikithi.
Izikhathi ezingathandeki kakhulu zivela lapho indiza iqhubeka ishiya futhi ihlala phansi. I-Avromya, lapho indiza isemazulwini, ingane ngeke ize iqaphele. Kodwa abazali bayoba nzima kakhulu: izingane eziningi azihlali phansi futhi abazali kufanele baziqaphele ngokukhethekile. Uma ezimweni ezijwayelekile izingane ziziphatha ngokuzithoba futhi zifana nazo, khona-ke endizeni nephakheji lezingane ezihlinzekiwe ngeke kube khona inkinga. Uma lokhu kungakusizi, zama ukumbamba ngentandokazi yakho oyithandayo noma entsha, engakaze ibone. Kukhona izindiza ezinjalo ezihamba ngezinyawo ezinganeni ezigibela indiza futhi ziholele kumshayeli wegumbi lakhe. Kodwa kuthatha imizuzu embalwa nje, ngakho cabanga ngokucophelela ukuthi uzoya kuphi. Kufanele uqonde ngokucacile ukuthi kuzodingeka ugcine futhi ujabulele ingane ngamahora angu-4, noma mhlawumbe 8.
Ngakho-ke, uma ungenayo isihlalo sabakhubazekile, khona-ke kunoma yiliphi izwe laseYurophu iningi lale ndawo yokuqasha iyatholakala, kodwa kufanele ube nekhadi lesikweletu. Kuhle ukuthi ube ne-kangaroo noma i-rucksack ohambweni. Uma ungavumi ukusebenzisa izinto ezinjalo, zama ukujwayela ingane ngalokhu ngaphambi kokuhamba. Akekho owaziyo ukuthi umntwana uzobe ekhululekile kuwo.
Kungcono ukuhlala empesheni yomndeni noma ehhotela elincane maphakathi nedolobha. Nazi izinsiza zokubiza izingane, kunezingama-$ 4 ngehora awutholi. Kodwa lokhu kuseNtshonalanga Yurophu. Noma yikuphi edolobheni lesifundazwe ungathola umfana othile kumfundi noma umfundi wesikole esiphakeme futhi ukhokhe ingxenye yakhe. Izinsizakalo ezinjalo eGrisi, eTurkey, eCroatia, kwa-Israyeli zibiza kancane. Futhi uma uphuma ngaphandle kwehhotela elibizayo eHungary noma eCzech Republic, khona-ke uzobe udingida i-$ 1.5 ngehora.
Uma ufuna ukuthola into eshibhile, kodwa ikhwalithi eliphezulu, yiya ku-Yuzhno-Vostok. E-India, eThailand naseBali, ingane yakho izothathwa ngamasenti angu-25 ngehora. Ngisho nangaphandle kokwazi ulimi lwakho, bazobhekana nalokhu ngokugcwele.
Uma izingane zakho zingabomvu, khona-ke zizokukhokha ngokweqile futhi zize zikucele ukuthi uthathe isithombe. Ungabi nabuhlungu kakhulu ingane ukuze kuzuze ukushisa okukhulu okushisa, ngakho-ke kungcono ukungabi ebusika. Kungcono ukuya entwasahlobo noma ukuwa. Ungaya ngisho naseNingizimu-East, uma ungasheshi ukubuyela emuva. Abashadile abahlakaniphile benza kanjalo - kuqala umuntu ohamba nomntwana, kanti okwesibili kufika kancane kancane bese uhlala isikhathi eside kwelinye izwe noma abazali nabagogo nomkhulu beza esikhundleni sabo kubazali babo. Lokhu kubizwa ngokuthi indlela ye-occlusal. Ungakhohlwa ukuthi abanye abantu bayodinga imvume yokuhamba nengane yakho. U-notary kumele amqinisekise. Futhi ugcine kuze kube lapho uhamba khona ekhaya, ngoba kungadingeka.
Ukuya kwamanye amazwe, ukugoma kungadingeka. Bheka ngaphambi kwalesi dokotela ophulukisa ingane yakho.
Ukuhamba okunjalo njengezindawo zokubhuka zaseTurkey, eGibhithe, e-Israel, eCyprus, eCroatia, ingane izodluliswa, kanye nokuhlala emazweni angaphandle.
Ungakhohlwa ukuthi usishintshe isimo hhayi wena kuphela, kodwa futhi nengane, ngakho-ke unake kakhulu ingane. Badinga isikhathi esingaphezulu izikhathi ezimbili zokujwayela isimo sezulu. Qaphela ukuthi ingane ayinakeki, ungayithinti kakhulu ngomsebenzi futhi ake siphumule. Kodwa uma ephikisana naye, akafuni ukulala, bese umenza engenamsebenzi. Kungcono usebenzise amahora ambalwa naye endaweni enokuthula, upende, udlale bese ezolile bese ejwayele ukulala lapho kunesidingo.
Izingane zithanda ukukhetha konke okuzungezile, ikakhulukazi ukudla. Ngakho-ke, akudingekile ukondla izitsha zangaphandle, engazi. Futhi uma izinsuku ezimbalwa umfana omncane engadli, ungacindezeli. Ngeke kube yingozi kuye. Qaphela imikhiqizo evamile: ubhanana, inyama, isinkwa, ushizi, ama-apula, njll.
Uma unemisebenzi eminingi enhlelwe, wabeka isikhathi sokuvakashela izindawo zokudlala ezijwayelekile nabantwana bendawo. Kumntwana kuyoba ngaphezu kokuthakazelisayo. Ngaphezu kwakho konke, ukhumbula ukuthi ezinye izingane azikhulumi ulimi lwakhe, kepha lokhu ngeke kube yisithiyo sokudlala ndawonye.
Yini okufanele uyenze ngosuku lukaValentine, uma ungenaye indoda?
Amaholide okubulala, noma kuphi lapho eholidini khona entwasahlobo
Ummangaliso waseNdiya: Delhi - idolobha lamathempeli namasiko asendulo
Isimo Sezulu eSt. Petersburg: NgoDisemba 2016. Isibikezelo sezulu esifanele esivela ku-Hydrometcenter ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga eSt. Petersburg naseLeningrad Region
Amanzi okugeza - umphumela wokwelapha womoya
I-sauna ewusizo yempilo yabantu
Lapho iholidi lasebusika liqala ngo-2016
Izakhiwo eziwusizo nokusetshenziswa kwe-yarrow emithi
Iyiphi uhlobo lempesheni izinkanyezi zaseRussia ezithola?
U-Sobchak uzobeletha indodakazi, futhi uSemenovich uzoba umama wamawele
Indlela yokukhetha i-dessert efanele ukuze ungalimazi isibalo
Ukusikhipha okungajwayelekile futhi okuwusizo ngezinkuni ze-bamboo
Izakhiwo eziwusizo ze-chamomile
I-Turkish turkey nama-oranges
Izinkukhu zezinkukhu neklabishi
Ukudla - ukulahleka kwesisindo esiphumelelayo
Amabhilikosi omisiwe nge chocolate
Isaladi nobhontshisi ebusika
Izimpawu ze-bronchitis yengane, ukwelashwa kwakhe
Ukudla komntwana kusuka ezinyangeni ezintathu
Indlela yokungahambisani nendoda ukuhamba
Imibala enemfashini yezingubo, Autumn-Winter 2015-2016, izithombe zemibala yangempela kakhulu
Yini ongayibhalela umfana uma ufuna ukuzijwayeza kwi-intanethi?